भोलि अक्षय तृतिया, राशिअनुसार के दान गर्ने ? « Farakkon
भोलि अक्षय तृतिया, राशिअनुसार के दान गर्ने ?
युवा ज्योतिषी मुस्कान खनाल,
दाङ, बैशाख २३। वैशाख शुक्ल तृतीयाका दिन भोलि स्नान, जप, तप, हवन, दान गरी अक्षय तृतीया पर्व मनाइँदैछ । यस दिन गरिएको दान, होम, जप, तपको फल अक्षय अर्थात् कहिल्यै नष्ट नहुने भएकाले वैशाख शुक्ल तृतीयाको दिनलाई अक्षय तृतीया भनिएको हो । मत्स्य पुराणलगायत ग्रन्थमा आजका दिन गरिएको कर्म फलदायी हुने बताइएको छ ।
शिव र पार्वतीका बीच विवाह पनि वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात् अक्षय तृतीयाकै दिन भएको शास्त्रमा उल्लेख छ । आज माटो, तामा वा पित्तलको घडामा सर्वत राखेर ब्राह्मणलाई दान गरिन्छ । यस्तो घडामा ब्रह्मा, विष्णु र शिव तीनै स्वरुपका भगवानको निवास हुने मान्यता छ ।
जौको सातुमा गुड, चिनी, घिउ, दही मिसाएर एवम् सक्खर हाली सर्वत बनाएर ब्राह्मणलाई दान गरे कहिल्यै नाश नहुने अक्षय फल पाइने धार्मिक विश्वास छ । आजका दिन घरमा आउने सबैलाई जौको सातु र सर्वत खुवाइन्छ । यसो गरेमा भगवान् विष्णु खुशी हुनुहुने विश्वाससमेत रहेको छ ।
यस अवसरमा निराहार व्रत बसी विष्णुलाई अक्षताले पूजा गरेमा राजसूर्य यज्ञको फल प्राप्त हुने मत्स्य पुराणमा वर्णन गरिएको छ ।
सर्वत र सातु दान गर्नेले यो लोकमा सुख र परलोकमा सद्गति पाउने धार्मिक विश्वास छ । यसरी दान गर्नेका पितृ प्रसन्न हुने र समुद्रमा पानी सकिए पनि आजका दिन गरेको दान र पुण्य कहिल्यै नसकिने कुरा वैदिक ग्रन्थमा व्याख्या गरिएको छ ।
वैशाखे मासि राजेन्द्र शुक्लपक्षे तृतीयका । अक्षया सा तिथिः प्रोक्ता कृत्तिकारोहिणीयुता । तस्यां दानादिकं पुण्यमक्षयं समुदाहृतम् ।।
अर्थात् कृत्तिका वा रोहिणी नक्षत्रयुक्त अक्षय तृतीयामा गरिएको दान अक्षय पुण्यफलदायी हुन्छ । विशेषतः यस दिन शास्त्रले दानादि कार्यको विशेष फल बताएका छन् । अर्थात् जो थोरै वस्तु दान गरे पनि त्यो अक्षय दान हुन्छ ।
त्यसैगरी को विशेष फल प्राप्त गर्न कुन राशी भएका व्यक्तिले के कुराको दान गर्ने आउनुहोस् चर्चा गरौ ।
मेष : रातो कपडामा मुसुरोको दाल राखेर दान गर्ने ।
वृष : चादी, सि्टिल वा सिल्पट को कुम्भ वा कलशमा सर्वत राखेर दान गर्दा धन वृद्धि हुन्छ ।
मिथुन : मुङ को दाल हरियो कपडामा राखेर दान गर्दा सुख, सम्पन्नता वृद्धि हुन्छ ।
कर्कट : चादीको सिक्का माटाेको कलश वा कुम्भमा जलमा डुवाएर दान गर्दा घरमा सुख सम्पन्नता मा वृद्धि हुन्छ खर्च मा कमि आउँछ ।
सिंह : सुर्यलाइ तामाको भाडो बाट जल चडाउने, त्यसैगरी अर्को भाडोमा नुन राखेर घर्को परिक्रमा गरी पुजा स्थानमा राख्ने तपाईंको घरमा धन वृद्धि हुन्छ ।
कन्या : हरियो चुरा , श्रीङारका सामग्री तथा मुङ को दाल दान गर्ने ।
तुला : सेतो बस्त्रको दान गर्दा लक्ष्मीको कृपा प्राप्त हुन्छ ।
वृक्षिक : काचको भाडोमा मह भरेर रातो कपडाले बेरेर दान गर्ने ।
धनु : पहेँलो कपडामा राखेर बेसार दान गर्ने वा वेसन को लड्डु दान गर्दा पनि अक्षय पुण्य प्राप्त हुन्छ ।
मकर : शनि ग्रहको मन्त्र जाप गर्ने , फलामको भाडोमा तिल वा तोरिको तेल दान गर्ने ।
कुम्भ : गरिब, भिखारी वा ब्राह्मणलाई अर्थ दान गर्ने ।
मीन : पहेँलो रङ को बस्त्र, तामाको कुम्भ वा कलश आदि दान गर्दा धन र सम्मान दुवै प्राप्ति हुन्छ ।
युवा ज्योतिषी मुस्कान खनाल
कुण्डली भाग्य ज्योतिष तथा वास्तु सेवा
सम्पर्क : ९८५११९३९६४